Johoraddii Geeska iyo Jinkii Reer Axmar | Page 3 of 9 | Kaasho Maanka
Johoraddii Geeska iyo Jinkii Reer Axmar
W/Q: Cabdifataax Barawaani
Qalinkii: Cabdifataax Barawaani
Eeg Qaybaha Sheekada
Carraaba markii ay indhaha saartay uunkii dareenka ba’an ku reebay ee isbarasho koobanina dhexmartay waxa si lama filaana qolkeeda dalaq u soo yiri walaalkeed Doolaal, isla markaana waxa ay wayday muuqii amiirka jineed ee ay indhaheedu ku maqnaayeen, waxaana ka lumay hadalkii oo sidii qof la dardaray ayay ugu jawaabtay walaalkeed taas oo shaki ku beertay. waxa ayna dabo gashey walaalkeed iyadoo dhinacna ka khaakhaayirsan maankeedana ay weydiimo tiro beelay ku hardamayaan oo ay kamid yihiin: “Tolow miyaa la arki doonaa? Xagguu ka baxay? Miyuu duuley?” Haddana shaydaanka hoosta ka naareysa oo ka amakaagtey sida ilbidhiqsiga ah ee ay u weydey amiirkii reer Axmar!
Doolaal iyo Carraaba oo wada socda waxa ay u galeen Boqor Baasaweyne oo kursigiisii boqortooyada isku kala waaxay. Mar keliya waxa ay Carraaba isha ku dhufatey weftiyo kala duwan oo reer Boqortooyo ah oo kobtii martida loogu talo galey fadhiya.
Waxa ay marar badan intii ay dhex socotey roogga guduudan ee qasriga garaadkeeda kusoo dhacayey weyddiimo kala jaadjaad ah, balse aanay mid kamid ah warcelin u heli weyddey. Wixii ay soo luudaanba, waxa ay soo hor istaageen aabbahood boqor Baasaweyne. Salaan kaddib, waa ay fadhiisteen. Kolkii ay sahalka la heleen kursigii xariirta iyo buushka ku sharraxnaa ee amiirradda loogu talo galey ayaa boqor Baasaweyne bilaabey ujeedka weftigan u joogo qasriga maanta. Waxa uuna ku yidhi Carraaba: “Aabbo, waxa maanta inna soo martiyey boqortooyadii ina adeerkay boqor Geesaweyne. Waxa aynna si milgo iyo sharaf ku dheehantahay iiga codsadeen in aan ku siiyo sidaasna laguugu daro amiirka uu dhalay ina adeerkay ee Warfaa Boqor Geesaweyne.”
Wuxuuna Boqor Baasaweyne hadalka ku adkeeyey in aanay diidi karin oo duco iyo habaar waalid ay mid qaadato. Sideedabana amiiradda Boqorkeeda ayaa u taliya, oo go’aankeeda leh ayuu ugu gebogabeeyey hadalka. Carraaba aad bay u niyad jabtey wax ay ku warcelisana waa ay garan weydey! Musiibo aanay fileyn baa cirka kaga soo dhacdey! Iyadoo gunuunuceysa oo gunuuseysa ayay taliskii looga talinayey qasriga boqortooyada iskaga baxdey oo ay qolkeedii si quusasho leh isugu tuurtey sariirteedii. Cabbaar kolkii ay oydey oo ilintii ka dareertey baa waxa usoo gashey hooyadeed boqorad Cosob. Wixii ay sasabtaba, oo waaniso, oo talo iyo tusaaleba u guudmarto waxa ay ku qanicisey in ay raalli ka noqoto guurka ina adeerkeed oo aysan aabbaheed ceebaynin maadaama uu yahay boqor aad looga qaddariyo loogana baqdo carriga uu ka taliyo.
Weftigii sidaa baa la isku afgartey iyo in diyaar garow aroos oo labada boqortooyo ka dhex dhaca la yagleelo. Carraaba dhinaceeda aad baa loo diyaariyey oo xinne, cusbur, sacfaraan, huruud iyo wixii duul haween oo dhan lagu qurxin iyo naashnaashi jirey baa lagu dalluugey. Dhalaalkeedii baa dhalaal dhaafey oo ay noqoteyba sidii muraayad la isku daawanayo. Waxa laga dhigey aroosad u diyaar ah in boqortooyo uun badan u talisa laga guursado oo la geeyo tii ay ka soo hayaantey mid lamid ah oo aan ka dhicin.
Marar badan waxa Carraaba maankeeda kusoo dhacey jinkii reer Axmar ee ku reebay raad jidhkeeda iyo maankeeda sidii sibaaq lagu seydhay giddaar ugu dhegay, balse waxa ay isku illowsiisaa hadallo ay kamid yihiin; “Ma soo noqon doono, dibna isuma arki doontaan ee waxaas maankaaga ka saar. Haddana gabadh marwo ah baad noqon doontaa, nolol cusub inaad bilaabato oo waxaas hore aad illowdo ayaa kuu wanaagsan”.
Jinkii reer Axmar laftiisu ma uusan u iman Carraaba intii yagleelidda arooska lagu gudo jirey. Meel alla meel uu jaan iyo cidhib dhigey la waa!! Tolow xagguu qabtey? Bal adba!! Carraaba lafteedu kolkii ay weyddey jinkii waxa ay ka quusatey warkiisa iyo rejo dambe oo dhinaciisa ah. Waxa ayna billowdey ka firkiradda arooskeeda iyo in ay isku maaweeliso ka bixidda noloshan iyo sariirtan cidlada ah ee nacladdu ku dhacdey!! Waxa ayna u haqan taageysaa in ay tagto xariir lala wadaago oo dhidiidka iyo reenku ka baxo!!
Dhinaca kale ee boqortooyada Carraaba guursaneysa ee boqortooyada Geesaweyne waxa la diyaariyey wiilkii amiirka ahaa ee boqorku dhalay oo ahaa Amiir Warfaa Geesaweyne. Amiir Warfaa waa nin maahsan, bilaa dhug ah, dumar aan haweysan iyaguna aanay haweysan, wax matare dhinac kasta ah lagu xanto. Marar badanna waxa uu boqor Geesaweyne ka shakiyaa in uu dhalay alle doorigan ceebeeyey! Waxaana rag qasriga boqortooyada ka mid ah kula taliyeen boqor Geesaweyne in Warfaa uu u guuriyo amiirad Carraaba Baasaweyne aynna kaga filnaan doonto arrimihiisa, noqon doontana mid asturta ceebtiisa intaan uunka loo taliyo iyo boqortooyaduba wada ogaan. Sidaas ayuuna boqorku ku aqbalay taladaas oo uu ugu doonay Carraaba.
Amiir Warfaa intii la toostoosin karayey lagama hagran, kol codka iyo hadalka loo toosiyo oo dubaaqda iyo suugaanta la isugu ladho iyo waxa uu ku odhan lahaa Carraaba, kol labbiska loo habeeyo oo kuwo aan indhuhu qaban abid loo xidho, kol muuqa sare iyo saanta loo dhalaaliyo, kol awoodda iyo murqaha leylisyo adag loo diro iwm, Se abuur iyo toosin abuur baa horreysee waxba waa laga beddeli kari waayey amiir Warfaa. Laga daal oo lagu noog lagana quusey!! Waxa se talo kusoo biyo shubatey in sidiisa loogu aqal geliyo Carraaba, wixii ay kala dheefaanna laga dhursugo.
Wixii labada dhinacba midba xaggooda la isasoo naashnaasho, waxa la gaadhay dharaartii uu ku beegnaa aroosku, waxaana Carraaba loo soo galbiyey xaggaas iyo boqortooyadii boqor Geesaweyne. Mashxaradda, alalaaaska iyo farxadda ayaa is qabsatey. Hobollada kuwii ugu codka baxsanaa ayaa maalintaa johoraddii geeska ee Carraaba heeso quluubta kasoo go’ay ku galbinayey. Ciyaarta iyo damaashaadka, ayaa is xidhey inta u dhexeysa labada boqortooyo ee tolka ah. Gashaanti kasta oo qasriyada lagu carbinayey maalintaa dibadda ayaa ay usoo wada dareereen iyagoo biyaha tufaya. Qaarkoodna ka makhruuqsan guurka Carraaba maadaama oo ay cidladii iyo kelinnimadii sidaa kaga baxdey halka iyagu ay cidlo iyo cadho ay ku lammaantahy faruurto ruug muddo kusii jiri doonaan ama uu lalis dafi doono!!
Waxa lasoo gaadhey qasrigii boqortooyada Geesaweyne, waxaana lagu soo dhaweeyey fan iyo qurux aan hore loo arag, damaashaad, raynrayn, farxad, duco iyo wixii dhalo boqortooyo isku maamuusi jireyba maalintaa la isulama hadhin si midba ka kale ugu tookho oo aan looga soo dhaweyn wacnaan. Waxa intaas kaddib la isugu tagey qeybtii arooska loogu talo galey kaas oo lagu diyaariyey hobollada kuwii ugu codka macaanaa, deedna halkaas ayey muddo dadkii ugu raaxeeyeen naxariistii dibnahooda kasoo burqaneysey. Markii aad looga dhugtey ayaa haddana loo kacey dhankaas iyo qeybtii gasiinka kala jaadjaadka ahi lagu sharraxey oo qof weliba uu dhinciisa ka galey. Xilli galab gaabana oo ay wali cadceeddu soo jeeddo ayaa durabadiiba la guda-galay diyaarinta waddaadkii labada caruus isku xalaalayn lahaa!!
Waddaadkii oo ahaa laftiisu mid boqortooyadu leedahay ayaa bilaabey isu xalaalaynta labada caruus, oo ku bilaabey in uu oggolaanshahooda uu weyddiiyo labada dhinac. Waxaana loogu koobey warkiiba haa iyo haggaag waddaadow. Warqaddii ayuu u qorey, ducadiina waa u raaciyey. Codkii aamiinta ee martidu ay tidhi ayaa gariiriyey qasrigii iyo dibaddiisaba. Lagu kala dareer qasrigii boqortooyada Geesaweyne, qof walbana u jeedsadey halkii hoy ama hayaan ka xigey. Amiir Warfaa iyo amiirad Carraaba ayaa la isugu xareeyey qol aad loo xardhey oo aan ishuba ka libiqsaneyn. Sariir aad loo gogoley, xariir midabkeedu rasiin xigeen buluug ah yahay, birkim aad u giiigsan, cabitaanno iyo khudaar kala jaad ah oo hareeraha ka taalla sariirta…
Aragtidaada kudar qormadan
Faallooyin xiise leh
Cusub Hore Ugu codka badan
Wa qormo ad uwangsan ina so jidtey runti wa qiso igu cusup
Vote Up0Vote Down Ka jawaab
Waa sheeko xiiso leh ee ma halkaasay ku istaagtay.
Qeybihii kale maxa ku dhacay bas miyaa?
Qeybtii 10aad mala waayey?
Aragtida Hobbes, Spinoza iyo Kanta ee Diinta
Qaybta: Diimaha, Falsafad, Xulka
Dadku waxay dhashaan iyagoo diin la'aan ah. Diinta uu qaadan doono waxa uu ka dhaxlaa deegaankiisa barbaareed iyo dadka ku nool diinta ay rumaysan yihiin. Waxa uu bilaabma in uu weyneeyo wax aanu garanayn, oo aanu ku qaadan caqligiisa intuu rogrogay. Xilliga uu barbaarka yahay waxa maankiisa buux dhaafiya su'aallo tiro beel ah, oo aanu jawaab waafi ah u heli karin. Wakhti ka bacdi waxa uu la...
Saadaashii dhabawday ee Daarwiin
Gobol kasta oo aduunka ka mid ah, naaslayda ku nool waxa ay kasoo farcantay noole kale oo dabar go’ay kaasoo isla gobolkaas ku noolaa, sidaas daraadeed, waxaa dhici karta in Afrika uu ku noolaan jiray noole daanyeer oo kale ah (Ape) kaasoo dabar go’ay aadna ugu dhawaa Gorilla-ha iyo Chimpanzee-ga, maadaama labadan noole yihiin labada noole ee noogu dhaw nooleyaasha maanta jooga, waxaa...
Sideen ku gaaloobay?
W/Q: Muxsin Jaamac
Qaybta: Diinta Islaamka, Sheeko Faneed, Xulka
Waa goor fiid ah, waxaan dul jiifaa firaash dhexyaal qol ay laambad daciif ahi ka baxayso. Gacanta midig ayaan moobil yar ku haystaa. Waxaan marba dhan u mushaaxayaa ciwaanada aan ku leeyahay baraha bulshadu ay ku kulanto. Judhiiba ishaydu waxay qabatay maqaal aan dhawr caana maal ka hor qoray. Waakan alaylahe Facebook-gu uu maanta isoo xasuusiyay. Ho'gaaa!! ma afar sanaa ka soo wareegtay? Alla...
Akhri Qormadan10 Faallo
W/Q: Cabdifataax Barawaani 2nd August 2019
Bare Sare Maxamuud (Xamdi) iyo Galileo Galilei halkee ayay iskaga egyihiin?
Geeddi iyo Gashaantimihii Xeebta